Site na: KongoLisolona: Ọktoba 17, 2020 00: 35 Enweghị asịsa
Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịa KongoLosolo Inc. va envoyer un code qui contiendra 25 $ US aux 4 premières personnes qui donneront la bonne réponse. Emechaa avoir donné la bonne réponse, veuillez nous contacter in box de (KongoLisolo Inc.) ou nous écrire par e-mail à : ndị ọrụ nlekọta ndị ahịa @kongolisolo.co. Anyị ga-akpọtụrụ gị na igbe maka nkọwa ndị ọzọ.
Nke a bụ ajụjụ anyị: « Comment s’appelle l’assassin de Laurent-Désiré Kabila et à quelle date et heure avait eu lieu cet assassinat ?? »
Ọrụ ncheta: na Jenụwarị 17, 1988 - Jenụwarị 17, 2014, ka anyị kpụpụ anyị n'ime oge isi mmalite nke Etienne Tshisekedi bụ obi ike ọchịchị; ọ nọgidere bụrụ onwe ya dịka onye akara ngosi, akụkọ ifo ma na-adọrọ adọrọ na onye ndu; ọ bụ n'ihi ya strangely enigmatic agwa ya na-enweghị atụ ruo mgbe ọgwụgwụ akwụ ya aha otutu nke "Sphinx of Limeté"
Ọkt26 11: 05